BLUNDER – Beyond Mortality
कहाँ छन सुप्रिमो ?
पार्टी साधन मात्र भयो र त्यसका कार्यकर्ता साधनका पनि ‘साधन’ भए । आज माओवादी पार्टी अस्तित्वमा छैन, तर यसको अर्थ उसले जनयुद्धमा प्रयोग गरेका कार्यकर्ता यो समाजमा छैनन भन्ने होईन ।
कमरेड, आत्मा बेपत्ता पारियो !
कमरेडले राजधानीमा माओवाद र प्रचण्डपथको नाममा अन्तिम पटक मुठि उचालेर लाल सलाम गरिरहँदा उता दुर्गा परियार के गर्दै थिईन् ? सायद साँझको लागि नून, खुर्सानी जोहो गर्न गोसाई र बाउसाहेबको दैलोमा फरीयाको फेर थापेर बसेकी थिईन की ?
पुल बजार : हराएको परिवार
विना कुनै सूचना आएको त्यो वादि परिवार कुहिरोमा विलायो । कसैले बताउन सकेन उनीहरु कता गए । भनिहाले नि कुहिरोले सारा पृथ्वी ढाकिएको थियो । कसैले देखेन उनीहरु गएको बाटो । उनीहरुका पदचाप साउने झरिमा कतै मेटिए । बिलाए ।
“ओ ! मेरा साईबाज “
बस समय भन्दा ढिला गुड्छ । आँसुहरु बग्छन्, रुमाल हल्लिन्छन् । प्रियसीहरु भन्छन् “ओ ! मेरा साईबाज ”
झुक्किरहने दुई तिहाई !
समृद्धिको कोकोहोलो मच्चाईरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कहिले चीनि व्यापारीले झुक्याउँछन् । कहिले मन्त्रालयका सचिवले त कहिले ठेकदारले ।
प्रेम वर्जित सहर
मको मार्ग हुँदै जीवनको पूर्णता खोजिरहेका युगीन जोडीलाई हामी त्रसित बनाउँछौँ ।
खतरनाक ! ‘अयोग्य’ क्रान्तिकारी
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवले लडाकु जीवनबाट गैरलडाकु वा नागरिक जीवनमा रुपान्तरित हुँदा लडाकुलाई दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक पर्ने देखाउँछ । तर, नेपालमा यस्तो नगरिएकै कारण पूर्वलडाकु अझै पनि समाजमा समायोजन हुन सकेका देखिँदैन ।
पार्टी बचाउन मर्नेहरु
स्मृतिको गर्तमा गइसकेका ती क्रान्तिकारी अनभूति सतहमा ल्याएर नोस्टाल्जिक हुन चाहँदैनन् शाही ।
चण्डले चस्मा हटाउँदै बारम्बार आँशु पुछेको दृश्य अहिले पनि युट्युबमा देख्न पाईन्छ ।
मुलक्करमको विरोधमा आफ्नै स्तन काट्ने नांगेली (सुन्दरी)लाई अहिले भारतीय इतिहासबाट समेत विलयन गराईएको छ । सन् २००६ मा भारतको विद्यालय पाठ्क्रमको पहिरन तथा जाती शिर्षकमा नांगेलीको कथा राखिएको थियो । सन् २०१६ मा नांगेलीको कथा विद्यालय पाठ्यक्रमबाट हटाईयो ।
परिचय र विद्रोहको दुखान्त ‘साथीको कथा’
यथार्थको बिझाउने क्रुर काँटीमा उनिएको प्रेम कथा पो देख्नुहुन्छ कि ?
हामीले प्रश्न नगर्न कहाँ मिल्छ र ? माङ्गेना अनुभूति
दिनभर समृद्धिका समाचार तयार पारेर म साँझ बसेरा फर्किने समयमा गाडीभाडा सापटी माग्दो रहेछु । चिया पसलमा समृद्धीका समाचार सुन्दै कोही एक कप चिया उधारो खाँदो रहेछ । समृद्धिको सुनौलो सपना देख्दै कोही कतारको जहाज चढ्दो रहेछ ।
सत्ता शक्ति र मोहको चक्रव्यूहमा न्याय
सत्ता र शक्ति सिहँदरबारमै छ । सत्य के पनि हो भने सिहँदरबार बाहिरबाट सिहँदरबार कहिल्यै हल्लिदैन् ।
बटाला यस्ता कालिकोटे हुन् जसले दुःखकै सागरहरु हिँड्दै आए ।वर्षेनी सरकारलाई तिर्नु पर्ने करको लागि पैसा कसरी जोहो गर्ने भन्ने पनि डर छ ।
(अ) प्रिय बा !
प्रारब्धले बालाई स्मृतीको गहिरो खाडलमा लगेर राख्यो । समयले मलाई नदीको अर्को किनारामा हुत्याइदियो जहाँबाट मैले आफ्नै बासँग परिचित हुने मौका गुमाउन विवश भएँ ।
पोखरा : अ विम्ब नगरी
हतारो निलेर उग्राईहरेका पोखरेली ताल । कहिलेकाहीँ लाग्छ पोखरा तालजस्तै जमेको छ । जम्न नसकेको तालमा बाँध बारिएको छ । र, जम्न बाध्य पारिएको छ ।
मैले अरुथोक केही जानेकै छैन । त्यही भएर पनि म लेखनमै सन्तुष्ट छु । फेरी अव्यवस्थीत मान्छे पनि हुँ । त्यो अंग्रेजिमा डिसअर्गनाईज भन्छन नी ।
रेनी डे विथ चिल्ड वियर – ५
संभोग र संसर्गका ति यौनिक रातहरु कल्पना गरेर दिन विताउने दुस्कर्म गर्छु । तिम्रो गमन विलयन सफल रहोस । तिम्रो हृदय जस्तै यौनागं पनि पवित्र रहोस भनि जिसससंग प्राथना गर्छु ।
रेनी डे विथ चिल्ड वियर – ४
कालो गाता सहितको सानो बाईबलाई काखी च्यापेर, नगरको झरीमा गिर्जाघरतर्फ दौडिरहेको एक जोरी मानव तपाईले देख्नुभयो ?
रेनी डे विथ चिल्ड वियर – ३
काठमाडौंको रंग उसले पनि सापटी मागी । रंगिन आवरणले जीवनका श्यामश्वेत यथार्थ ढाक्ने उसको प्रयास जारी रह्यो । तर, आकांक्षाको अहममा प्रहार भयो । ठेस लाग्यो ।
रेनी डे विथ चिल्ड वियर – २
सापटी मागेको चुरोटको फिल्टरमा गुलाबी लिपस्टीकको दाग थियो ।
रेनी डे विथ चिल्ड वियर -१
निमेषभरको समय जीवनको पहिलो शून्य समय थियो । मलाई थाह थिएन मलाई के चाहिन्छ ? मलाई मेरो चाहाना थाह थिएन ? मेरो आवश्यकता थाह थिएन ? आफ्नै आवश्यकता र चाहाना पनि थाह नहुने मान्छे हुन्छन यो पृथ्वीमा….दैव !
परिचयका पत्रमा ठमेल
Archives Select Month June 2019 (5) February 2019 (1) December 2018 (1) November 2018 (2) October 2018 (1) September 2018 (3) August 2018 (3) July 2018 (1) June 2018 (5) May 2018 (3) April 2018 (2) March 2018 (4) February 2018 (1) January 2018 (2) December 2017 (1) November 2017 (2) October 2017 (2) August 2017 (2) July 2017 (3) June 2017 (1) May 2017 (2) April 2017 (4) March 2017 (6) February 2017 (4) January 2017 (5) August 2016 (5)
#DEATH #LOVE #भाषा #शब्द# love#LIFE#DEATH काठमाडौं क्रान्तिकारी खाजागृह जनयुद्ध प्रेम महिला वियर समय सिनेमा